Ezi Ụzọ! Alaeze Chineke Na-abịa n’isi nso! TheTrueWay.xyz | A kọwara eziokwu Baịbụl—ezigbo Ụzọ – TheTrueWay.xyz & jwjw.org
Ezi Ụzọ! Alaeze Chineke na-abịa n'isi nso! TheTrueWay.xyz
Ezi Ụzọ! Alaeze Chineke na-abịa ngwa ngwa!
Okwu Chineke bu what ndị mmadụ kwesịrị ịdị na-ele anya. Ọ bụ ìhè na-egbuke egbuke nke eziokwu nwere ike inyere ndị mmadụ aka ịgbatị ofufe ha na-efe Onye Pụrụ Ime Ihe Nile.
Ọrụ nke òtù a bụ ịlaghachi azụ dị ka o kwere mee na nkwenkwe mbụ nke ndị mbụ na-eso ụzọ Kraịst, wepụ ozizi ụgha ndị batara n'ime ya. A bịara mara ofufe dị ọcha nke ndị na-eso ụzọ mbụ ahụ dị ka "Ụzọ" (Ọrụ 9: 1-2). Ya mere, a na-akpọ ozi a Ezi Ụzọ.
Emebere saịtị a ka ndị mmadụ bipụta akụkọ na isiokwu maka onwe ha ma ọ bụ maka ozi!
Eziokwu adịghị mkpa ka a jụọ ya ajụjụ mana ụgha na-eme ya.
E nwere ọtụtụ ndị ikom na òtù ndị chọrọ ka ndị mmadụ na-elegara ha anya, na-azọrọ na ha nwere nkwado Chineke ma na-eme ihe ịrịba ama dị ike. Ma a gaghị aghọgbu ndị Chineke. Okwu mmadụ na-ebute naanị obi nkoropụ. Jeremiah 10: 23
Ndị hụrụ Chineke n’anya ga na-elegara ozi Chineke anya mgbe niile maka mmesi obi ike na nduzi. Ebe a na-enyere ndị mmadụ aka inyocha ihe ha kweere na imezigharị ofufe ha, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, nakwa ka ha na Onye Pụrụ Ime Ihe Niile dị ná mma. Ọrụ 17: 11-12
Ị nwere ike iche na ọ dịghị mkpa ka i nyochaa nkwenkwe gị. Nke ahụ bụ kpọmkwem ihe nnukwu onye mmegide nke Onye Pụrụ Ime Ihe Niile chọrọ ka ị chee. Ọ chọrọ ka ndị mmadụ gbasoo okwu mmadụ karịa nke Chineke. Mkpesa nwere ike ịdị ize ndụ.
Ka anyi huta na anyi emeela ka ofufe anyi guzozie, n'ubọchi nlele!
Gaa na otu Facebook
© 2022 Ezi Uzo! Alaeze Chineke na-abịa n'isi nso! TheTrueWay.xyz